बाँदरलाई हानेको गोली बालकलाई लागेपछि…. - Deshko News Deshko News बाँदरलाई हानेको गोली बालकलाई लागेपछि…. - Deshko News
बाँदरलाई हानेको गोली बालकलाई लागेपछि….
खोटाङ, भदौ १३
प्रहरीले मानकाजीलाई बन्दुकसहित पक्राउ गरेको छ । बालकको शव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसेलुखर्कमा परीक्षण गरेर आफन्तको जिम्मा लगाइसकिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थल जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट टाढा भएकाले घटनाबारे विस्तृत जानकारी आउन बाँकी रहेको प्रहरी प्रमुख प्रनाउ चिमरियाले बताए ।
बाबुआमा वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेश गएपछि शैलेन्द्र मानकाजी आमाको बहिनीको घरमा बसिरहेका थिए । बाँदर छेक्न गएका बालक बाँदर आउने भनिएको स्थानबाट आएपछि गोली लागेको जलेश्वरीका वडाध्यक्ष नैनकुमार राईले बताए ।